Iigama zeJaji zeNgcaciso ngokuKhangela kuBaphulaphuli | Martech Zone
Iimpawu zeJaji zeNgcaciso ngokuBona kwabaphulaphuli
NgoLwesibini, Agasti 11, 2009 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 UAdam Omncinci
Xa ugweba ukubiza amagama, gcina engqondweni amava okwenyani, hayi amava obuxoki. Nantsi into, xa usithi okanye ubonise igama uluvo lomntu ngenjongo yokumngenisa okanye anike ingxelo, akanamava afanayo anokuba nawo kumthengi ebaleni.
Xa uveza igama izimvo, umxhasi wakho okanye umntu osebenza naye uya kwenza ukuba azi, asebenze ngengqondo. Uya kucinga, "ngaba ndiyayithanda?" Oku kuziphatha akuhambelani namava alindelekileyo, abathengi, abatyali mali, abasebenzi, abanikeli, abasebenzisi (njalo njalo) baya kuba nayo.
Kwakhona, gcinani engqondweni ukuba kuphela ngabantu abakwishishini lophawu kunye nentengiso abachitha ixesha elininzi bekhetha izinto ezilungileyo nezingalunganga zegama. Ewe, ngaphandle kokuba igama libi, injalo. Emva koko unokufumana uJoe Consumer enepati encinci yokuhlekisa ngeendleko zakho. Kodwa ukuba igama lakho lihambelana nesicwangciso-qhinga sakho soqwalaselo ngononophelo, umndilili wethemba awusebenzisi millisecond kuhlalutyo olusengqiqweni.
Inyani yile yokuba abantu banamagama kwi-subconscious, kwinqanaba leemvakalelo. Masithi intetho yakho yokuhamba ihamba into efana nale:
Molo, ndinguJan Smith, umcebisi weinjini yokukhangela kunye neeGazillions. Ndinceda abantu ukuba bahambe kwiwebhu xa bekhangela uhlobo olulungileyo lolwazi.
Ngaba ndiyalithanda elo gama? Ngaba iyavakala? Ngaba wonke umntu uyalithanda elo gama? Ngaba elo gama liyalixelela lonke ibali lale nkampani.
Hayi, umphulaphuli uyayiqhuba yonke le nto umxelele yona (kwaye mhlawumbi uskene kuwe ukuze ufumane imikhondo enokukuthemba xa uqhuba uluhlu lwezinto ezingama-20 ekufuneka ezenzile kamva ngala mini.) Igama lakho leshishini okanye lemveliso ngu ulwazi nje olunye oluncinci. Xa ubuchopho buyibamba, iya emsebenzini iskena iifayile zangaphakathi malunga nokuba igama linganjani okanye lahluke kwiimvakalelo ezinxulumene noko. Ingqondo inokubhalisa ngokukhawuleza:
Iibhiliyoni. Kuninzi. Izandi ziluhlobo lokonwaba. Ayiqhelekanga. Mhlawumbi kuyingozi. Kuya kufuneka umamele ngakumbi.
Anditsho ukuba igama alibalulekanga. Ngapha koko, yinxalenye ebalulekileyo yenkqubo yakho yokubonisa uphawu. Igama liseta ithoni okanye libonelela ngolwazi okanye zombini. Njenge-logo okanye naliphi na inani lamanye amanqaku okuchukumisa, igama yindawo yokungena kwimifanekiso nakwimvakalelo abantu abaya kuyenza ecaleni kwakho, inkampani yakho, iimveliso zakho kunye neenkonzo.
Inqaku lam liyinyani ngendalo yokuphononongwa koyilo. Nokuba uyayenza ngokwakho, usebenza nabacebisi okanye ungumcebisi, kuya kufuneka ubeke ingxelo yakho ngokwembono yomamkeli womyalezo. Ngoku nceda, phuma uye kuzenzela igama elihle.
tags: uhloboUkufaka uphawuIgama leKhampaniigamaamagamaIgama lemveliso
Agasti 12, 2009 kwi-12: 02 AM
Ngendinayo impendulo eyahlukileyo kule ngaphambi kokuba ndifunde uBlink (incwadi kaMalcolm Gladwell). Ngokusisiseko iyaphula imigwebo esheshayo esiyenzayo yonke imihla.
Phambi kokuba ndifunde uBlink ndingathi "buza iqela labantu kwaye ubone ukuba leliphi elicinga ukuba lelona lifanelekileyo" kodwa inkqubo yethu yokwenza izigqibo yeyona nto ibaluleke kakhulu. Kunzima ngakumbi ukwenza izigqibo zokuthengisa xa ucinga ngale nto.
Kum, uBlink wayefana nomthi wolwazi eBhayibhileni. Andiqinisekanga ukuba ngekhe ndihlale ebumnyameni.